Global Voices teny Malagasy » Però : Bilaogy dimy, lahatsoratra dimy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Oktobra 2018 13:23 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Però, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Tontolo_iainana
Hiato hijery ny bilaogy voalohany isika, Consultor Internet [ES] an'ilay bilaogera sambany nanokatra ny bilaoginy. Araka ny avoitran'ny anarany, manoratra momba ireo lohahevitra mifandray amin'ny aterineto izy. Ny lahatsorany “Ny fahafatesan'ny “Terminal Internet” ve ? ” dia mandalina ny lasitra « terminal public internet » (Fanamarihan'ny mpandika : fitaovana natao ho an'ny daholobe mba hahafahana mahazo aterineto) ao Però, ny fitsofohany manerana ny firenena, ary hatramin'ireo fanamby ankehitriny sy ho an'ny hoavy.
Amin'ny ankapobeny, mpiaro navitrika ny « terminal Internet public  » aho, izay afaka hita ao Però, hetsika santatra mahaliana ahafahan'ireo mpampiasa miditra amin'ny aterineto amin'ny vidiny mirary, izay mamaha ny olana rehefa tsy manana aterineto any an-trano ianao, na tsy afaka mandoa ny saran'ny famandrihana aterineto miadam-pandeha ampiasàna ny tariby telefaona (mihisatra kokoa raha oharina amin'ny « terminal public»). Nisy fiantraikany miabo ho an'ny andaniny sy ny ankilany ilay toejavatra tao Però, satria betsaka ankehitriny ny isan'ireo mpampiasa aterineto raha miohatra amin'ny isan'ireo toerana afaka idirana aminy. Hatreto, afaka maharaka ny zavamisy ireo peroviàna mpampiasa aterineto noho ny fisian'io lasitra iray io, saingy heveriko fa mampiseho mariky ny fahadrodrohany io rafitra iray io. Ao anatin'ny andian-taranaka vaovaon'ireo tranonkala aterineto vao mipongatra no misy ny fanazavàna azy io, izay miantso ny fandraisana anjaran'ireo fitaovana ifandrimbonana mba hizaràna lahatsary sy saripika, fitaovana ‘peer-to-peer’, sy vontoaty mampiasa endrika media marobe ».
Entin'ny fitsidihana manaraka isika ho amin'ny bilaogy Pura Finta [ES], izay mamoaka amin'ny fomba mitsitaitaika lahatsoratra momba ny zavatra iainany ao Lima, tanàna onenany. « Tacora, tanàna haolo izay ny halatra no lasa fandraharahana  » dia fijoroana vavolombelona iray tamin'ny fitsidihany ny iray amin'ireo faritra izay tsy maintsy itandremana fatratra ny fandehanana any.
Mis Otros Dragones [ES] bilaogy iray tena malaza eny anivon'ireo samy bilaogera ao Lima, toy ny anaran'ny tompony ihany: Dragon. Super Floreando en Peruano …, ny iray tamin'ireo lahatsoratra farany nosoratany dia ohatra tsara amin'ny fakàna sary an-tsaina ananan'ireo bilaogera, azo takarina ao anatiny ny maro amin'ireo nàmany bilaogera ao Lima, toy ny hoe … “mahery noho ny mahery”.
Desde mis ojos  [ES]…bilaogin'i Angela no mitantara ny fiainany andavanandro, ny zavatra mahaliana azy sy izay efa niainany tany am-piasàna, saingy indraindray, mamoaka lahatsoratra izy momba ireo zavamitranga nahatohina na nanjo azy, toy ity iray ity: « Manaja lalàna ny tsy rariny », izay iampangàny ireo fanararaotana atao amin'ireo tompontany madinika any amin'ny iray amin'ireo faritra lavitra andriana sy tsy misy mpijery ao amin'ny firenena.
Farany, navoakan'ny bilaogy Grupo Periodismo Digital [ES]  ny lahatsoratra iray momba ireo mpanao gazety sy bilaogera ao amin'ny Liberty Radio ; bilaogera roa fantadaza no niresaka ny amin'ireo bilaogy sy ny lohahevitra mifampiankina amin'izany. Hita ao anatin'ilay lahatsoratra ireo rohy mitondra mankany amin'ny rakipeo manontolo tamin'ilay fandaharana tamin'ny onjampeo.
Ny sabotsy 26 mai, tao amin'ny efitrano fitenenana an'ny Radio Libertad  ireo bilaogera sy mpanao gazety Juan Carlos Luján  sy Vladimir Terán Altamirano  , nasain'ny fandaharana El Reportero mba hiresaka momba ireo bilaogy sy ny lanjan'izy ireo ao anatin'ny fiarahamonina [peorviàna]. Noararaotin'ireo mpanao gazety nasaina ilay fotoana mba hiadiana hevitra momba ireo lohahevitra hafa toy ny fivakisana niomerika, ny podcasts, ny fampianarana ireo teknolojia vaovao, ny Tranonkala 2.0.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/30/128714/
 Consultor Internet : http://www.consultorinternet.com/
 Ny fahafatesan'ny “Terminal Internet” ve ?: http://www.consultorinternet.com/2007/05/el-agotamiento-del-modelo-cabinero.html
 terminal Internet public: http://www.yachay.com.pe/especiales/cabinas/
 Pura Finta : http://ecnn777.blogspot.com/
 Tacora, tanàna haolo izay ny halatra no lasa fandraharahana: http://ecnn777.blogspot.com/2007/05/tacora-tierra-de-nadie.html
 Mis Otros Dragones : http://misotrosdragones.blogspot.com/
 Super Floreando en Peruano: http://misotrosdragones.blogspot.com/2007/05/super-floreando-en-peruano.html
 Desde mis ojos: http://angelavo.blogspot.com/
 Grupo Periodismo Digital [ES]: http://grupoperiodismodigital.blogspot.com/
 Radio Libertad: http://www.radiolibertad.com.pe/
 Juan Carlos Luján: http://www.juancarloslujan.blogspot.com/
 Vladimir Terán Altamirano: http://vladimirteran.blogspot.com/